Ifektri yochungechunge lwamapayipi akhethekile abakhiqizi, abahlinzeki
Ipayipi legesi le-HDPE liqinile futhi liphephile, lisetshenziswa kakhulu kubunjiniyela begesi basemadolobheni. Life Impilo ende ukusetshenziswa okuphephile iminyaka engaphezu kwengu-50. Lex Ukuvumelana nezimo Ipayipi le-PE linokunwebeka ngesikhathi sekhefu elingaphezu kuka-500%. Ngeke idabuke ngaphansi kwezinguquko ezahlukahlukene ezingaphansi komhlaba ezifana nokuncipha komhlaba nokuzamazama komhlaba, futhi inokuphepha okuphezulu. Indawo yokugoba (R≥15D), asikho isidingo samalunga endololwana, esivumelana nokwakhiwa. Resistance Ukumelana Okubandayo Umugqa wokunwebeka wokulingana kwepayipi le-PE ngu-1.5X10-4mm / m ...
Imayini yamalahle ye-HDPE Underground Pipe
Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi / antistatic Izinto antistatic futhi ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi amapayipi polyethylene esetshenziswa ezimayini zamalahle zisatshalaliswa ngokulinganayo emzimbeni ipayipi, ngakho antistatic futhi ilangabi cishe yizinkomba ukusebenza izinkomba ngeke kuthinteke isikhathi eside ukusetshenziswa. Izici ezinciphisa umlilo nezelangabi zihambisana nezindinganiso zikazwelonke futhi zilungele izindawo ezithile lapho kungasha khona futhi kuqhume khona ngaphansi komhlaba. I-lightweight / kulula ukuyifaka Ubuningi bamapayipi we-polyethylene asetshenziswe ku-co ...
Ukuqapha ikhwalithi yamanzi angaphansi komhlaba namapayipi akhethekile epulasitiki emithonjeni ejulile
Ipayipi lomthombo wepulasitiki linezimpawu zesisindo esincane, ukumelana nokugqwala okuqinile, ukuqina okuhle, izindleko eziphansi, njll Embonini yemithombo yamanzi emazweni angaphandle, ikakhulukazi emazweni athuthukile, kusetshenziswa amapayipi emithombo epulasitiki engaphezu kuka-80%. Umkhuba wokuthuthuka wesikhathi esizayo emkhakheni wemithombo yamanzi ukusebenzisa izinto ezintsha ukwakha imithombo ukuxazulula izinkinga zokugqwala nokukhula, ikakhulukazi inkinga yokulwa nemithombo yamanzi ezindaweni ezinosawoti omningi. PVC-U plastic ipayipi has ch ...